Ahoana ny fametrahana optifine ho an'ny Minecraft? - Lalao
Optifine dia mora iray amin'ny mods tsara indrindra izay azo ampiasaina amin'ny Minecraft. Izy io dia maody fanontana java izay manampy amin'ny fanatsarana sy fanatsarana ny lalao ny lalao. Afaka mankafy an'izao rehetra izao Minecraft milamina amin'ny optifine ianao. Na dia hita manerana ny sehatra filalaovana rehetra aza ny lalao dia tsy mandeha afa-tsy amin'ny solosaina ny optifine. Tsy azonao apetraka amin'ny finday na konsole io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba ahafahanao misintona sy mametraka optifine amin'ny PC-nao.
Dingana hampidinana sy hametrahana Optifine ao amin'ny Minecraft:
Mba hametrahana ny mod amin'ny solo-sainanao manokana dia tsy maintsy ampidininao aloha ny mpampiditra.
Tsindrio ireo rohy ireo, rohy 1 na rohy 2 . Ity dia tokony hitondra anao any amin'ireo tranonkala ofisialy optifine izay ahafahanao misintona ny installer. Rehefa avy eo amin'ny tranonkala ianao dia tadiavo ny menio Download.
Raha vantany vao tsindrio ny safidy DOWNLOAD, dia hamindra anao mankany amin'ny pejy vaovao feno dokam-barotra ianao. Miandrasa 5 segondra ary avy eo tsindrio ny safidy 'mitsambikina', izay hiseho eo amin'ny zorony ambony ankavanan'ny varavarankely. Hamarino tsara fa tsy manindry zavatra hafa ianao.
Rehefa tsindrio ny bokotra fampidinana dia hangataka fahazoan-dàlana aminao hamonjy ilay rakitra ianao. Hamarino tsara fa jereo ny fanitarana ny rakitra alohan'ny avelanao. (tokony ho rakitra .JAR)
Kitiho havanana amin'ny installer ary kitiho ny 'open with' ary avy eo safidio ny safidy 'Java Platform SE Binary'. Kitiho ny bokotra installer.
Rehefa avy nametraka ny mod tam-pahombiazana ianao dia mila mandefa ny Lalao.
Aorian'ny fipihana eo aminy dia hisy menio mipoitra mampiseho anao ireo mods napetrakao amin'ny solosainao. safidio ny 'optifine' avy eo ary kitiho ny 'play'.
Tokony ho azonao atao ny manamarina fa mandeha tsara ny mod amin'ny alàlan'ny fijerena ny ankavia havia amin'ny efijery Gaming.
Ny vidin'ny optifine
Optifine dia MAIMAIMPOANA amin'ny vidiny rehetra. Azonao atao ny misintona azy avy amin'ireo tranokala roa noresahinay tao amin'ilay lahatsoratra teo am-piandohana.Raha asaina mandoa ianao dia diso amin'ny tranokala diso ianao ary voadoka.
1Q. Fanontana Optifine iza no alaina?
taona:OptiFine Ultra no fanontana malaza indrindra izay tokony alainao.
2Q. Ahoana ny fanavaozana ny optifine?
taona:Mila mitsidika ny tranonkala optifine ianao ary misintona ilay kinova nohavaozina avy hatrany nefa tsy misy fanairana.
3Q. Ahoana raha tsy misy safidy hisokatra amin'ny 'Java Platform SE Binary'?
taona:Ny mety dia tsy apetrakao Java amin'ny PC-nao. azonao sintonina avy amin'ny Eto
4Q. Ahoana no hanamafisako ny fahamarinan'ny mpampiditra?
taona:Amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny tranokala URL. Tsy misy afa-tsy tranokala roa tena efa nolazainay tetsy ambony tamin'ity lahatsoratra ity.
Optifine dia mod tena tsara hanatsarana ny zavatra niainanao Minecraft. Satria tonga maimaimpoana amin'ny vidiny dia tsara ny manana. Optifine dia manana fahaiza-manao amin'ny lafiny Solosaina tohanan'ny azy satria azonao ampiasana azy amin'ny fametrahana avo lenta ary koa ny Setup izay sahirana amin'ny fanaovana asa isan'andro.
Hevitra sy torohevitra momba ny hoditra Minecraft tsara indrindra
Adobe Creative Cloud ho an'ny mpianatra - Makà fihenam-bidy manokana
Pads famoahana tsy misy tariby tsara indrindra (2020) - Android & iPhone
google chromecast ho an'ny fampidinana laptop
iza no manana robux be indrindra amin'ny roblox
ovay ny rakitra ho mp3 an-tserasera
mividy kaody karatra fanomezana amazona
sarimihetsika maimaim-poana tsy misy fampidinana tsy fisoratana anarana
fampiharana android tsara indrindra amin'ny filalaovana mozika